उत्तम शरीर, शास्त्रीय ग्रीसमा सौन्दर्य Absolut यात्रा
सौन्दर्य सांस्कृतिक हो, आज के सुन्दर छ पहिले सुन्दर थिएन, के एक शताब्दी मा सुन्दर हुनेछ आज हामी त्यो तरीका विचार भन्दा धेरै फरक हुन सक्छ। तर यो सत्य हो कि आज सामान्य सौन्दर्य केही हदसम्म संचालित हुन्छ जुन पुरानो ग्रीकहरु सुन्दरताको योग्य ठान्छन्। हो, उत्तम शरीर र सौन्दर्यको जन्म शास्त्रीय ग्रीसमा भएको थियो.
आज हामी बोल्नेछौं, तब हाम्रो संसारमा सौन्दर्यको स्रोत: शास्त्रीय ग्रीस। त्यहाँ शताब्दीयौं अघि सिद्ध शरीर र सौन्दर्यको हाम्रो सबैभन्दा चिरस्थायी मानकहरू उत्पन्न भए।
2 उत्तम सौन्दर्य
3 उत्तम शरीर
ग्रीसको इतिहासमा यो समयावधिको नाम हो जुन मोटे तौर मा बोलिएको छ ईसापूर्व XNUMXth र XNUMXth शताब्दीको बीच। बाट C. यो ग्रीक पोलिस र सांस्कृतिक महिमा को heyday हो। यो महिमा मूर्तिकलामा विशेष गरी सजिलैसँग देख्न सकिन्छ, जसले त्यस कलाको लागि त्यसदेखि नै यसको जग राख्यो।
ग्रीकहरूले शरीरलाई हेरे र यो, यदि यो सुन्दर थियो भने, सुन्दर आन्तरिक झल्किन्छ। दुबै गुणहरूको लागि शब्द, एउटै सिक्काका दुई पक्षहरू जस्तो थियो kaloskagathos: भित्र सुन्दर र बाहिर सुन्दर। विशेष गरी यदि ऊ जवान मानिस थियो भने।
यो सोचाई मूर्तिकलामा व्यक्त गरिएको थियो, एक सुन्दर युवाले आफ्नो सौन्दर्य, बुद्धिमत्ता, र देवताहरूले माया गरेकोमा तीन पटक आशिष्‌ पाएको थियो भन्ने धारणा थियो। एक लामो समय को लागी यो सोचेको थियो कि यस कालका मूर्तिकलाहरु लाई त्यो विचार, एक कल्पना, एक इच्छा प्रतिनिधित्व गर्दछ, तर सत्य यो हो कि मोल्डहरू भेट्टाइएको छ, त्यसैले आज यो ज्ञात छ कि ती सुन्दर मूर्तिहरू जुन ईसापूर्व XNUMXth औं र XNUMXrd शताब्दीका बीचमा बनेका थिए वास्तविक व्यक्तिहरूमा आधारित थियो।
एक जना व्यक्तिलाई प्लास्टरले ढाकिएको थियो र मोल्ड पछि मूर्तिकलालाई आकार दिन प्रयोग गरियो। ग्रीकहरु, हामी कुरा गर्छौं पुरुषहरूले जिममा लामो समय बिताए (यदि तिनीहरू धनी थिए र खाली समय थियो भने, स्पष्ट रूपमा)। एक औसत एथेनियन वा स्पार्टन नागरिकको शरीर एक वर्सास मोडेलको रूपमा मूर्तिकलाको रूपमा थियो: साँघुरो कम्मर, पछाडि, सानो लिंग र तेल छाला ...
त्यो मान्छे को सम्बन्ध मा, तर ग्रीक सुन्दरताको कस्तो आदर्श महिलाहरूको थियो? ठीक छ, धेरै फरक। यदि एक मानिस मा सुन्दरता एक आशिष् थियो, एक महिला मा यो एक खराब कुरा थियो। एक सुन्दर महिला समस्याको पर्याय थियो। कालोन काकन, सुन्दर र नराम्रो कुरा, अनुवाद गर्न सकिन्छ। महिला सुन्दर थिई किनकि उनी सुन्दर थिइन र ऊ सुन्दर थिई किनकि उनी सुन्दर थिइन। सोच्न को त्यो लाइन।
र यो पनि देखिन्छ कि सौन्दर्य निहित प्रतिस्पर्धा: त्यहाँ सुन्दरताहरु भनिन्थ्यो kallisteia, जसमा घटनाहरू लेस्बोस र टेनेडोस टापुहरूमा भएका जहाँ केटीहरूको न्याय गरियो। उदाहरण को लागी, अफ्रोडाइट Kallipugos र उनको सुन्दर ढुंग्रो को सम्मान मा एक प्रतियोगिता थियो। त्यहाँ सिसिलीमा उनको मन्दिर निर्माण गर्न साइटको खोजीको वरिपरि एउटा कथा छ जुन अन्ततः दुई किसान छोरीका नितम्बहरू बीचमा निर्णय गरिएको थियो: विजेताले मन्दिर निर्माण गर्न उक्त स्थान छनौट गर्‍यो, किनभने उनीसँग राम्रो गधा थियो।
शास्त्रीय ग्रीसमा कुन कुरा सुन्दर मानिन्छ? भित्ति चित्र र मूर्तिकलाका अनुसार पुरातन ग्रीकहरूले सुन्दर शरीरको रूपमा लिने संक्षिप्त सूची बनाउन सकिन्छ। गाला गुलाबी हुनु पर्छ (कृत्रिम वा प्राकृतिक), कपाल या त दाह्री हुन वा राम्रोसँग रोलमा व्यवस्थित गरिएको थियो, छाला स्पष्ट हुनुपर्दछ y आँखा eyeliner हुनु पर्छ।
एक महिलाको उत्तम शरीर हुनु पर्छ फराकिलो हिप्स र सेतो बाहुहरू, जसको लागि धेरै पटक तिनीहरू जानाजानी पाउडरले ब्लीच गरिएको थियो। यदि महिला रेडहेड थिइन भने, बधाई छ। यो हुन सक्छ कि मध्य युगमा रेडहेड्स हानी हुनेहरू थिए, बोक्सीविद्या र ती अनौठो चीजहरूको माध्यमबाट, तर शास्त्रीय ग्रीसमा उनीहरूको पूजा गरियो। Blondes? उनीहरूसँग कुनै नराम्रो समय थिएन। छोटकरीमा, देवी एफ्रोडाइट वा हेलेन का ट्राय सुन्दरताको आदर्शको पर्यायवाची थिए।
फराकिलो कम्मर र सेतो छाला को विचार वास्तव मा धेरै शताब्दीहरु को लागी राखिएको थियो: एक मजबूत शरीर राम्रो पोषण को पर्यायवाची हो र यसैले, कल्याण संग जीवन। सेतो छाला पर्यायवाची हो, बदलेमा, गुलाम हुन वा बाहिर काम नगरी घर भित्र।
तर त्यसोभए, आज जस्तो सुन्दर र सिद्ध शरीरले बलि चढाउँदछ। थोरै मानिसहरु जन्मेका हुन्छन् जादू की छडी द्वारा। छालालाई सेतो राख्न, वा सेतो राख्नको चाहनाले महिलालाई आफ्नो स्वास्थ्यलाई असर गर्ने विधिहरू अपनाउन अग्रसर गरायो।
पुरातनताका सौंदर्य प्रसाधनहरूमा पहिलो टिप्पणी मध्ये एक ठीक त्यस समयको हो। ग्रीक दार्शनिक टेफस्टस डे एरेसोसले उनीहरू कसरी बनाउँदछन् भन्ने वर्णन गर्दा त्यसो गर्छन् नेतृत्व आधारित क्रीम वा मोम। स्पष्ट रूपमा, सीसा थियो र छ विषाक्त
को उपयोग मेकअप यो उच्च वर्गमा व्यापक थियो किनकि सबै चीजले सौन्दर्यको शोषण गर्छ, तर त्यहाँ थुप्रै शैलीहरू थिए। वेश्याहरुका उनीहरु थिए र अर्को राम्रो परिवारका महिलाहरु। यो देख्नको लागि यो पर्याप्त थियो कि महिलाले कसरी छुट्याईएको थियो पहिलेको भन्दा बढी लोड गरिएको आँखा र चम्किला ओठ, र hairको कपाल र अधिक साहसी लुगा। सामान्य जस्तो।
के थिए हेयरस्टाइलहरू शास्त्रीय ग्रीस मा? ग्रीक महिलाहरूमा कपालका पुराना उदाहरणहरू उनीहरूसँग देखाउँछन् braids, धेरै र सानो। यदि हामी भाँडामा हेर्छौं, उदाहरण को लागी, तपाईं यो शैली देख्न सक्नुहुनेछ, तर स्पष्ट रूपमा समय बित्दै जाँदा फेसन परिवर्तन भयो।
यस्तो देखिन्छ कि XNUMXth औं शताब्दी वरिपरि उनीहरूले आफ्नो कपाल तल लगाउनुको सट्टा उनीहरूले यसलाई बाँध्न थाले, सामान्यतया एकमा रोडेट। तिनीहरू पनि प्रयोग गर्थे गहना र सजावट गहना वा परिवार सम्पत्ति देखाउनको लागि केहि चीज जस्तै। थियो छोटो कपाल? हो, तर यो पर्यायवाची थियो शोक वा कम सामाजिक स्थिति.
अवश्य पनि, यस्तो देखिन्छ हल्का कपाल अँध्यारो भन्दा पनि बहुमूल्य थियो, त्यसैले यो सूर्य संग संयोजन मा स्पष्ट गर्न सिरका वा निम्बू को रस प्रयोग गर्न यो सामान्य थियो। र यदि उनीहरू कर्लहरू चाहन्थे भने, तिनीहरू बनाउँथे र माहुरीका माथीले भिजाउँथे ताकि केश लामो हुने थियो। र के को बारेमा शरीरको कपाल? के ग्रीक महिलाहरू केशविन भएका केश्रीहरू जस्तै २० औं शताब्दीसम्म नै थिए?
कपाल हटाउन सामान्य थियो र वास्तवमा, युनानीहरूको बीचमा मात्र होइन तर अन्य संस्कृतिहरूमा पनि। त्यस समयमा, क्लासिकल ग्रीसमा, कपाल नभएको फेसन नै थियो, यद्यपि उनीहरूले कपाल हटाउन कसरी प्राप्त गरे भन्ने बारेमा थुप्रै सिद्धान्तहरू छन्। यो भनिन्छ कि सार्वजनिक कपाल आगोको साथ जलाइएको थियो वा रेजरको साथ दाह्री थियो।
त्यसैले यदि एक महिला आज समय मा यात्रा गरे, कुन उत्पादनहरू तपाईंको ड्रेसिंग तालिकामा हराउन सकेन? जैतुनको तेलएक शुष्क छाला को लागी र यदि यो सुगन्धित जडिबुटीहरु संग संचार गरिएको थियो किनकि यसले शरीर वा कपाललाई सुगन्ध प्रदान गरेको छ; miel सौन्दर्य प्रसाधनहरूमा, माहौं गुलाब पानी र अत्तरको शृंखलासँग मिसाइन्छ जुन आवश्यक तेलहरू मिसाउने तेलहरू र धेरै सुगन्धित फूलहरूको साथ बनाईएको थियो, कोइला आँखा, eyelashes र भौहें र अन्य खनिजहरूको लागि, जब ग्राउन्ड, छाया र blushes को रूप मा सेवा।
एउटा तथ्य: एकल भौं यो कोइलाको साथ रेखामा चित्रित गरेर हासिल गरिएको थियो वा, यदि यो पर्याप्त थिएन भने, तिनीहरूले तरकारीको रालले जनावरको कपाल चिपकाए।
यो सत्य हो शास्त्रीय ग्रीसमा, कलाकारहरूले पुरुष र महिलामा शारीरिक सौन्दर्यको धारणालाई परिभाषित गरे को विचार आविष्कार गर्दै "आदर्श शरीर।" मानव शरीर, उनीहरुका लागी, संवेदनात्मक मजा लिने वस्तु र मानसिक बुद्धिकताको अभिव्यक्ति थियो।
ग्रीकहरूले बुझे कि पूर्णता प्रकृतिमा अवस्थित छैन, यो कलाद्वारा प्रदान गरिएको हो। त्यसैले त्यहाँ विचार छ कि एक मूर्तिकलाएको शरीर शुद्ध डिजाइन हो। माथि हामीले भन्यौं कि ग्रीक मूर्तिकारहरूले वास्तविक मोडलहरू प्रयोग गरे, यो सत्य हो, तर कहिलेकाँही यो एकल मोडेल थिएन, तर धेरै। उदाहरण को लागी, एक को पाखुरा, अर्को को टाउको। त्यसकारण, ती दिनहरूमा राम्रो प्रशंसा एउटा जवान मानिसलाई बताउनु थियो कि ऊ कुनै मूर्तिकला जस्तो देखिन्छ।
यदि एफ्रोडाइट महिला सुन्दरताको आदर्श हो भने, Heracles उत्तम पुरुष शरीर को आदर्श थियो। एथलिट, सुपर म्यान, यौन र इच्छाको प्रतिनिधित्व। ट्याटूको साथ आज जस्तै, शरीर कला र तौल उठाउँदै गर्दा, म अरूको शरीर र उनीहरूको आफ्नै शरीरलाई पनि हेरिरहेको थिएँ।
ग्रीक कला पुरुष रूप मा अधिक केन्द्रित थियो स्त्री भन्दा र यो हेर्न उत्सुक छ कि कसरी समय बित्दै जाँदा कलाले एक व्युत्क्रम मार्गलाई पछ्यायो, पुरुषमा भन्दा महिलामा बढी केन्द्रित। मध्य युग, पुनर्जागरण वा बारोक फार्मको बारेमा विचार गरौं।
प्रतिबिम्बित गर्दा, शरीर र सौन्दर्यको बारेमा बहस सधैं सुर्खाहरूमा रहन्छ। पुरातनतादेखि आजसम्म, नेफर्टिटी र एफ्रोडाइटदेखि रुबेनका आइमाईहरू, मर्लिन मोनरो, 90 ० को दशकका सुपर मॉडल र २१ औं शताब्दीका सेलिब्रिटीहरूले प्लास्टिक टच-अपको साथ, हामी मानव शरीरको एक आदर्शलाई विचार गर्न जारी राख्छौं जुन हामी आफैले भन्दा अरुको लागि बढी।
त्यसोभए, अब तपाईंलाई थाहा छ, अर्को पटक तपाईं संग्रहालयको भ्रमण गर्नुहुन्छ र क्लासिक मूर्तिकलाहरू भेट्नुहुन्छ, ती शरीर र तपाईंको वरिपरिका मान्छेहरूको नजिकबाट हेर्नुहोस्। प्रश्न यो छ, हामी कहिले स्वीकार्छौं र त्यस्ता प्रकृतिले हामीलाई बनाउँछ?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » उत्तम शरीर, शास्त्रीय ग्रीसमा सौन्दर्य